Roobab Dabaylo Wata Oo Shalay Illaa Xalay Ka Da’ay Xeebaha Somaliland, Is-Gaadhsiinta Oo Meelaha Qaar Go’day Iyo Daadad Xooggan Oo Kusoo Rogmaday Inta U Dhaxaysa Bullo-Xaar Illaa Saylac – somalilandtoday.com
Roobab Dabaylo Wata Oo Shalay Illaa Xalay Ka Da’ay Xeebaha Somaliland, Is-Gaadhsiinta Oo Meelaha Qaar Go’day Iyo Daadad Xooggan Oo Kusoo Rogmaday Inta U Dhaxaysa Bullo-Xaar Illaa Saylac
(SLT-Hargeysa)-Roobab dabaylo culus wata sidoo kalena soo rogay daadad badan ayaa shalay gelinkii dambe Illaa xalay ka da’ayay badi deegaamada Xeebaha Woqooyi illaa Galbeed ee Somaliland kuwaasi oo aan illaa imika la ogayn khasaare iyo waxyeelo ay gaysteen.
Dhinaca Magaalada Berbera Abbaaro Shantii Galabnimo wixii ka dambeeyey waxa magaalada Mar kali ah ku habsaday dabaylo cas oo ka yimid dhinaca Badda. Muddo kooban kadib waxa magaalada ka da’ay roobab isku xidhiidhsan oo shuux u badan balse roobabkan culayskoodu waxa ay ka da’een inta u dhaxaysa deegaamada Bullo-xaar, Ceel-sheekh, Cabdi-geeddi, Lughaya Illaa Zaylac. Tani waxa ay keentay in Magaalada Berbera muddo hakad la galiyey Korontadii iyo Khadka Is-gaadhsiinta.
Wargeyska FOORE oo isku dayay in uu khadka taleefanka kula xidhiidho deegaamadaasi ayaanay inta badan noo suurto galin maadaama goobo badan oo deegaamadaasi ah is-gaadhsiintu maqnayd wakhtigii aanu la xidhiidhaynay waxaase noo suurto gashay in aanu helno qaar ka mid ah dadka ku nool deegaamada Bullo-xaar, Lughaya iyo Saylac.
Wararkii ugu dambeeyey ee aanu ka helnay xalay illaa shalay galabna naga soo gaadhayay deegaamada Bullo-xaar, Ceel-sheekh, Cabdi Geeddi, Lughaya, Saylac Iyo Lughaya waxa ay tibaaxayaan in roobab dabaylo wata oo culusi ka da’een badi deegaamadaasi balse aan illaa hadda la ogayn wax khasaare ah oo dhab ah oo ka dhashay, inkasta oo aanay duufaanadaasi ahayn sidii kuwii sannadkan horraantiisii. Dad goob joog ah ayaa Wargeyska Foore u sheegay in roobab laxaad leh oo dabaylo culus wataa ka da’een deegaamadan kuwaasi oo is-gaadhsiintii hawada ka saaray sidoo kalena isu socodkii gaadiidka iyo dadkaba gabi ahaanba joojiyey.
Wargeyska Foore oo khadka taleefanka ku helay Farxaan Maxamed Yuusuf oo ku sugan Magaalada Zaylac ayaa waxa uu noo sheegay in roobab dabaylo wataa ku habsadeen magaalada Zaylac iyo hareeraheeda sidoo kalena ay ku soo rogmadeen daadad laxaad lihi, sidaa darteedna aanay jirin wax xaqiijin kara haddiiba ay roobabkaasi dabaylaha wataa waxyeelo gaysteen. Dhinaca Magaalada Lughaya oo aan isku daynay in aan la xidhiidhno gabi ahaanba waxa ka go’naa khadka taleefanka.
Isu socodkii Gaadiidka Jabuuti iyo Somaliland u kala goosha ayaa xannibmay iyada oo dooxyada dhinaca xeebtu keeneen daadad xad-dhaaf ah sida ay noo soo sheegeen dadka aanu la xidhiidhnay.
Toddobaadkan Horraantiisii ayay ahayd markii khubarada saadaasha hawadu sheegeen in duufaanta ku dhufatay biyaha Badda Carabta eek u wajahnaa Cummaan ay dhinaca Somaliland soo gaadhsiin karaan roobab iyo dabaylo.